Ikhaya le-R&D Kude Nekhaya. - I-Airbnb
Ikhaya le-R&D Kude Nekhaya.
Lawrenceville, Georgia, i-United States
I-ikamelo lezivakashi ephelele ibungazwe ngu-Darwin
U-Darwin Ungumbungazi ovelele
Ifulethi elingaphansi elikhulu elihlukile elinendawo yangasese. Indawo ethule. Indawo ebanzi engenamafuhlufuhlu enezindawo eziphezulu. Amamayela angu-5.1 ukusuka e-Infinity Energy Center ~ imizuzu eyi-15 ngethrafikhi encane. Cishe amakhilomitha angu-28 ukusuka e-Mercedes Benz Stadium yedolobha i-ATL nayo ene-GA aquarium kanye nomhlaba we-Coca Cola.
Awekho imicimbi, Awekho amaqembu. Ukupaka kungenziwa emgwaqeni ngebhokisi leposi kodwa hhayi endleleni eshayelayo. Izindebe ze-K ezinomkhawulo nezinye izinto zesiphuzo ezitholakalayo. Inani elilinganiselwe lezivakashi (4).
4.94 · 243 okushiwo abanye
I-Gwinnett County inamapaki angcono kakhulu. Indawo yethu iseduze kakhulu nabambalwa babo njengo-Alexander Park, kanye neBethesda Park. Futhi siseduze neDiscover Mills Mall (3.4 mi) kanye neMall of Georgia(13 mi).
Ngenkathi usahlala sicela ungangabazi ukufona nganoma yisiphi isimo esiphuthumayo noma usizo oludingekayo. Ngemibuzo ejwayelekile thumela umlayezo wombhalo futhi uzothola impendulo NGOKUSHESHA.
UDarwin Ungumbungazi ovelele